Qalinka Dahir Alasow iyo Qiyaanadii lagu dhacay qaaraankii qurba joogta Galmudug .
02 July 2013 Waagacusub.com-Sedex sano ka hor waxaa gurigeeyga iigu yimid odayaal ka tirsan qurba joogta Galmudug ee ku nool dalka Holland.
Odayaasha waxay ii sheegeen in qurbajoogta Galmudug sanad walba iyo bilooyinka qaar lagu qoray lacago qaaraana oo loogu tala galay in lagu caawiyo AGOONTA GALMUDUG.
Inkastoon odayaasha ii yimid aan shaki yar ka qabin inay been Naawilayaan ama qiyaamo sameeynayaan hadana waxaan kula kaftamay "ARMAAD QAARAANKEENA SIYAASAD U ADEEGSATAAN"
Waxay iigu Jawaabeen maya,sidaas darteed waxaan farta ka saaray Qaaraankii sanadka ee ugu horeeyay maxaa yeelay dhamaan gudigga aruurinta qaaraanka,waxay iila muuqdeen shaqsiyaad ka dhisan xaga Diinta,akhlaaqda,dhaqanka iyo daacadnimada.
Sedex sano qof walba gurigiisa ayaa lagu garaacay ,waana laga qaadayay qaaraanka.
Qurbajoogta Galmudug ee reer Holland kuma qanacsaneen badankood bixinta qaaraanka maxaa yeelay ,maalin qura lama tusin lacagaha laga qaaday halka lagu bixiyay - AGOON LA SIIYAY OO SAWIRO AMA VIDEO LAGA DUUBAY,GUDDI LACAGTA LOO XAWILAY AMA ALAAB LOOGU GEDAY.
Qof walba afka ayuu xirtay,waxaa hoos lagala guuxay in la xushmeeyo gudigga hoowsha wado oo miisaan culus xageena ka lahaa.
Nin ka mida gudigga qaaraan aruurinta wuxuu ahaa qofka iigu dhaw Jaaliyadda ee aan marnaba xagiisa ka filan hagardaamo,hoosaasin iyo qiyaano.
Ninkaan aan xushmad darteed u diiday inaan magaciisa u sheego ,waxaan u hayaa abaal shaqsiya maxaa yeelay waa ninka kaliya ee sedexdii Maxkamadooda ee aan Dahabshiil isla kornay igala qeybgalay ,ila joogay,ina caawiyay si walaalnimo leh,halka rag iyo dumar inta kale ee gudigga xitaa midkood telefoon igula soo xiriirin,marka laga reebo xilliyo ay dano u gaara iga lahaayeen.
Ninkaan Saaxiibka ama walaalka nahay wuxuu igula hadlay telefoon isagoo ii sheegay in 29 June 2013 la qaban doono xaflad bandhig faneed lacag lagu geli doono taas oo qarashaadka laga helo lagu kaalmeeyn doono AGOONTA GALMUDUG.
Saaxiibkeey waxaan weydiiyay " Waxaan maqlay inuu Holland imaan doono Ku xigeenka Cabdi Qeybdiid ,armeey xafladu siyaasad ku lug leedahay ama ninkaas loo sameeynayaa"
Saaxiibkeey wuxuu iigu jawaabay" Maya maya ,anagu siyaasad kuma lug lihin,waxaas ma jiraan ee xaflada imoow"
Maalin kadib wada hadalkeena waxaan ogaaday in Saaxiibkeey Warqad Casuumada u diray ku xigeenka dagaal ooge Qeybdiid,xafladuna tahay mid soo dhaweeyn loogu sameeynaa ninkaas si lacagtii nalaga qaaday loogu tamashleeyo.
Ninka xaflada loo qabtay Cabdi Samad Nur Guled ,xaga dhalyada hadii leey la xiriirin lahaa inaan qabiil ku diiday,waa abtigeey oo hooyadeey lix oday ka badan kalama tirsadaan,waligiina xumaan iilama bareerin laakiin tacbanenimadiisa waa ku keli,inta ku abtirsata reer abtina uldheerbeey iskaga fogeeyeen maxaa yeelay waa Curadka iyo Culumadda beesha Sacad,kamana suurtoowdo inay u sacab tumaan ninkii sheegtay inuu dilay Geesigii Afrika Jeneral Mohamed Farah Caydiid.
Hadii aan dib ugu laabto sheekada,Ma jirin qalbi xumo iyo qaadan waa nolosheeyda i soo maray maxaa yeelay ninkaan saaxiibkeey iyo kooxdiisa kama filan in lacagteey nooga qaadeen magaca AGOONTA ku taageerayaan ninkii dilay Aabayaasheen,awooweyaasheen ,wiilasheena ama walaalaheen.
Waagacusub markii aan ku qoray inaan ka baaqday xaflada waxaa ila soo xiriiray 36 qof oo ka mida dadkii laga qaaday Qaaraanka-waxaa ku jiray Ninkii lagu qoray inuu meesha ka yahay DJ oo lagu magacaabo sakariye,waxayna qof walba ku aheyd qaadan waa.
Sakariye wuxuu ii sheegay inuu xitaa xafladaba la socon balse magaciisa ku arkay iidhehda.
Dadkii oo rumeeysan waayay sheekadeyda waxay badankood tageen xaflada ,waxayna ka soo laabteen iyagoo madluunsan,qalbigana ku xambaarsan khilaaf,shaki iyo walaac.
Inkastoo maahmaah Soomaaliyeed tiraa " DAD IYO DUUR BA WAXKASTO KA FILO" hadana waxay Maskaxdeeydu daqiiqad walba isweydiineysaa " YAA LA AAMINAA HADIIBA XITAA ODAYAASHIINII AHLU SALAADKA. EE MASAAJIDADA SAFKA HORE UGA JIRAY MAANTA SIDAAN U DHAQMEEN,HADANA GARANWAAYEEN INAY CAFISWEYDIISTAAN SHACABKEEY QIYAAMEEN EE AAMINAY"
Qiyaanadii lagu sameeyay qurbajoogta laguma aflaxin,Lagumana arwaaxi doono,waxayna xafladii noqotay mid lagu kala dareeray "NIN AGOON KU XADAY QALIN,QAAXO KAMA FOGAAYO"
Dj shida heesaha waa laga waayay xaflada sidoo kalena Tikidhadii dadka lacagta looga qaadi lahaa waa la waayay.
Qurba joogta Galmudug ee Holland ayey qalbi xumo iyo khilaaf ka dhex abuurtay ,wuxuuna qof walba maanta xaqiiqsaday in qaaraankii laga qaaday lagu qamaaray ama la kala qeybsaday.
Fariinta qormadeyda waxay tahay,QALBI XUMOOW IIMA QOSOSHID,QEYBDIIDNA IIMA TALIYO,QAARAAN DAMBENA IGAMA QAADAN,
TAARIIKH QORAN IYO QARNIGA 21-AAD